Sida loo farsameeyo maktabadaha Minecraft | Madasha Mobile -ka
Sida loo farsameeyo maktabadaha Minecraft
Pablo sanchez | 25/09/2021 14:00 | Ciyaaraha
Minecraft waa ciyaar haysata guuto aad u weyn oo taageerayaal adduunka oo dhan ah. Mid ka mid ah furayaasha ciyaartan ayaa ah inaan si joogto ah u helno waxyaabo cusub iyada oo ay ugu wacan tahay sida ay u ballaadhan tahay koonkeeda, oo leh fikrado iyo walxo badan oo kala duwan. Sababtaas awgeed, xeelado cusub ayaa had iyo jeer la ogaadaa inay awoodaan inay hore ugu sii socdaan. Wax ay adeegsadayaal badani rabaan waa inay ogaadaan sida ay u farsamayn karaan maktabadaha Minecraft.
Haddii aad rabto inaad awood u yeelato inaad maktabad ku samaysato Minecraft, waxaan ku tusi doonnaa tillaabooyinka ay tahay inaan raacno kan xiga, si howshan ay aad kuugu fududaato mar walba. Farshaxanku waa wax muhiimad weyn u leh ciyaartan, sidaa darteed waa muhiim in la ogaado habka aan u awoodno inaan ku farsameyno shayada ama qalabka qaarkood koontadayada.
Waxaan kuu sheegnaa waxa maktabad ku taal Minecraft, habka ay suurtogal u tahay in kaligeed lagu soo saaro, iyo sidoo kale maaddooyinka looga baahan yahay cunto -kariskan ciyaarta iyo habka aan ku heli karno walxahan sidoo kale. Macluumaadkan waxaa kuu suurtogal ah inaad ku abuurto maktabadahaaga ciyaarta baloogga caanka ah ee aaladahaaga.
1 Maxay yihiin maktabadaha ku yaal Minecraft maxaase loogu talagalay
2 Sida loo sameeyo maktabad ku taal Minecraft
2.1 Farshaxanka maktabadda
3 Hel maktabado
Maxay yihiin maktabadaha ku yaal Minecraft maxaase loogu talagalay
Dukaanka buugaagta (oo sidoo kale loo yaqaan buug -yaraha ama maktabadda, ereyada aad wax badan ka heli doonto) waa block ku yaal Minecraft oo loo isticmaalo hagaajinta miiska sixirka. Waxaa intaa dheer tan, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida qurxinta ama shidaalka foornada ciyaarta. Marka buugaagtu jebiso ciyaarta, waxaad heleysaa saddex buug oo aad isweydaarsato, inkasta oo qoryahaas ka yimid ay lumeen oo aanan dib dambe u soo kaban karin.
Maktabad ku taal Minecraft ayaa naga caawisa helitaanka heerarka sare ee sixirka markaan isticmaalno miiska sixirka akoonkeena. Haddii aan rabno inaan gaarno heerka ugu sarreeya ee sixirka (waa heerka 30), waa inaan sameyneynaa 15 maktabadood. Tani waxay u baahan tahay wadar ahaan 45 buug iyo 90 unug oo alwaax ah, ama isticmaal 135 sonkor / waraaqo, 45 hargahood iyo 22,5 qoryo.
Dhinaca kale, maktabadaha buugaagta ee ciyaarta sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa shidaalka foornada. In kasta oo ay tahay shidaal aan waxtar lahayn, maaddaama muddada gubashada la sheegay ay la mid tahay tii alwaax, laakiin diyaarintiisu waxay u baahnayd xaddi badan oo maaddooyin ah, sidaa darteed runtii magdhaw nama siiso. Waa wax aan shidaal ahaan u adeegsan karno marka aynaan haysan wax kale oo beddel ah, laakiin waa inaysan noqon wax caadi ah.
Sida loo sameeyo maktabad ku taal Minecraft
Cuntada maktabadda ee Minecraft waxay ka kooban tahay laba maaddooyin oo waaweyn: qoryo iyo buug. Qoryaha ayaa noqon kara nooc kasta oo loox ah oo aan helno. Waxay la jaan qaadi kartaa geedkii, fir, bjchrk, kaymaha, qudhac, geed madow, casaan ama xitaa looxyo qaloocan, sidaa darteed waxaan leenahay dhawr ikhtiyaar oo ku saabsan arrintan marka ay timaado qoryo aan u adeegsan karno habkan.
Geedka agtiisa ah, waa inaan warqad haysannaa. Warqadan waxaa lagu helaa qasacadaha sonkorta, kuwaas oo sida caadiga ah laga helo meel u dhow meel biyo ah (webi, haro ama bad). Waxaan markaa ka heli karnaa dhulka iyo ciidda. Waxaan markaas ka saari karnaa sonkorta sonkorta si fudud annaga oo dooranaya oo gujineyna. Saddex cawsduur ayaa caadi ahaan loo baahan yahay si ay u awoodaan inay abuuraan saddex waraaqood guud ahaan.
Warqadda waxaa lagu farsamayn karaa sanduuqa alaabta iyo wax -soo -saarka. Halkaas waa inaad ku ridaa bakoorooyinka sonkorta si siman kadibna waxaad heli kartaa warqaddaas. Saddex cawsduur waxay u malaynayaan in saddex door lagu helo hawshan. In kasta oo buugaagta loo isticmaalo in lagu helo dukaanka buuggaagta, ma aha warqad kaliya, markaa waxaan weli u baahan nahay maqaar si aan u awoodno inaan buugga haysanno. Waxa hadda nala gudboon waa inaan helno lo ', oo aan ku dili karno seef kasta.
Sida lo'du u baaba'do, maqaar baa lagu daraa alaabtayada, oo aan markaa u adeegsan karno si aan u farsameeyo buuggaas. Cuntada la isweydiinayo waxay na weydiisataa inaan xaashida u dhigno si siman oo aan maqaar dhigno korka ama ka hooseeya warqadda. Tani waxay noo oggolaanaysaa inaan helno buug oo maadaama aan u baahannahay saddex, waxaan ku celinnaa habka si aan u helno saddex buug dhammaadka hawsha.
Guud ahaan, waxaad uga baahan doontaa lix loox oo nooc ka mid ah alwaax kuwaa lagu sheegay qaybtii hore iyo saddex buug, kuwaas oo aan ku tusnay sida aan ugu samayn karno koontadayada ciyaarta. Marka tan la sameeyo, hadda waxaan diyaar u nahay inaan soo saarno maktabaddeena ciyaarta. Cuntadani waa sida soo socota, oo aad ka arki karto sawirka kore:
Saddex loox oo siman oo xagga sare ah.
Saddex warqadood oo siman oo ku yaal qaybta dhexe.
Saddex loox oo jiif ah oo xagga hoose ah.
Tallaabooyinkan waxaan ka samaynay maktabad u gaar ah Minecraft. Geedi -socodka farsamaynta ma aha mid adag, maadaama waxa runtii nagu qaata ugu dheer ay tahay soo -saarista buugaagta aan adeegsan doonno maktabaddan dambe. Haddii aan haysanno agab nagu filan, waxaan samayn karnaa dhowr maktabadood haddii aan rabno. Inkastoo helitaanka waxyaabahan ay tahay wax qaali noqon kara.
Minecraft waxay noo oggolaanaysaa inaan samayno maktabad noo gaar ah, wax aan hore u aragnay. In kastoo, sidaan soo sheegnay, habsocodka laftiisu wuxuu noqon karaa mid qaali ah maxaa yeelay waa inaan sugno bakoorada sonkorta, dilo lo'da iyo qoryo ku filan mar walba. Laakiin dhab ahaantii sidoo kale waa suurtogal in la helo maktabadaha ciyaarta, maadaama waxaa si dabiici ah looga abuuray laba meelood ee caalamka Minecraft. Way fiicantahay in taas wax badan laga ogaado, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan ka helno hormarkeena ciyaarta.
Tuulooyinka ku jira ciyaarta, kuwa leh maktabad, toddoba maktabadood ayaa laga dhex abuuray dhismaha su'aasha. Sidaa darteed, haddii aan booqanno tuulo leh maktabad, waxaan arki karnaa inay ku jiraan gudaha buugaagtan buugaagta. Waxaa naloo siiyay suurtogalnimada inaan kala xaajoono tuulada tuuladaas wax ku saabsan dukaanka buugta ama dhowr. Waxaad awoodi doontaa inaad ka ganacsato, si aad mid u hesho hab ka faa'iido badan inaad dhisato.
Sidoo kale, Sidoo kale qalcadaha waxaan ka helnaa dukaamada buugaagta. Qalcadaha, ugu yaraan hal maktabad ayaa badanaa laga soo saaraa khaanadaha buugaagta oo lagu diyaariyey tiirar iyo darbiga. Maktabad walba waxaa ku yaal ilaa 224 dukaanno buugaag. Maadaama ay si dabiici ah uga abuurmeen deegaankan, waxaan heli karnaa qaar haddii markaan joogno aan aragno inuu jiro mid aan qaadan karno.
Sida aan ku hormarno ciyaarta oo waxaan booqannaa tuulooyinka ama qalcadda, markaa waxaan arki karnaa dukaamada buugta sidaan u soconno. Kaliya maahan inaan iyaga lafteena soo saarno, waqtiga iyo kheyraadka ay tani ku jirto, laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa meelahaas, maxaa yeelay meelahaas si otomaatig ah ayaa loo soo saaraa. Markaa waxaan dooran karnaa habka ugu dhaqsaha badan oo aan ku heli karnaa maktabadahaas si ka fudud intii aan farsamayn lahayn.
Waxaa jira waxyaabo ku saabsan maktabadaha ku yaal Minecraft oo ay tahay in la ogaado, si aan mar walba ugu diyaarsannahay inaan la shaqeyno. Hal dhinac oo muhiim ah ayaa ah haddii dab ama qarax dhaco, khaanadahaas waa la burburin karaa aad u dhaqso badan, sidaas darteed waa muhiim in laga digtoonaado. Haddii tani dhacdo, waxaan danaynaynaa inaan beddelno mowqifkaaga si aysan waxba u dhicin. Wax kasta oo nagu kiciyey inaan dhisno waa la burburin doonaa, marka waa inaan si dhaqso leh wax uga qabannaa.
Sidii aan hore u soo sheegnay, maktabadaha ayaa naga caawiya sixirka ciyaarta. Tani waa wax si cad loo arki karo haddii aan dhigno miiska sixirka meel u dhow maktabad ku taal Minecraft. Haddii aan sidaan sameyno, waxaan arki karnaa in walxo taxane ah ay soo bixi doonaan waxay ka soo baxaan buugaagtaas iyo inay markaa miiska soo gaari doonaan sixirrada waxaan hadda gelinnay. Tani waa wax gacan ka geysan doona sidii kor loogu qaadi lahaa sixirradaas, sababta ugu weyn ee isticmaaleyaal badani u isticmaalaan maktabadaha ciyaarta.
Sanduuqyada buugaagta si xor ah baa loo dhigi karaa. Bilowgii, ciyaartu ma aysan bixin suurtogalnimadaas, laakiin markii dambe ikhtiyaarka ah inaan awoodno inaan dhigno maktabad aan rabno ayaa lagu daray. Markaa waxaad ku ciyaari kartaa sidaad jeceshahay meeshaas ciyaarta. Sidaan soo sheegnay waxaa wanaagsan in laga fogeeyo wax dab ama qarax sababi kara, si aysan waxba ugu dhicin.
Xogtan waxaad hore u taqaan wax walba oo ku saabsan maktabadaha ciyaarta. Waxaad hadda ku farsameyn kartaa maktabad kuu gaar ah Minecraft, sidoo kale waxaad ka ogaan kartaa halka koonkan ballaaran ee ciyaartan ay si dabiici ah uga soo jeedaan, kaasoo noqon kara hab kaa badbaadiya hannaankan ah inaad naftaada farsamayso. Shaki la'aan, waxay yihiin caawimaad wanaagsan haddii aan rabno inaan hagaajino miiska sixirka, sidaa darteed way ku habboon tahay inaan xoogaa ciyaarta ku helno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo farsameeyo maktabadaha Minecraft
Sida loo soo celiyo koonto Dokkan Battle